Post nguva: 02-26-2021
Post nguva: 02-24-2021
Post nguva: 01-14-2021
Post nguva: 01-04-2021
Post nguva: 12-22-2020
Post nguva: 12-14-2020
Masikati kuwedzera ne50! 201-tsoka shanu dzakapetwa simbi isina simbi coil inoramba ichienderera mberi
Mumusika wemasikati, iyo 201-tsoka shanu yakapetwa simbi isina simbi coil stock ichasimudzwa ne50-100 yuan / ton. Zvinoenderana nemhinduro kubva kuvashambadzi vepamusika, kutengeserana mangwanani kwainakidza, uye mutengo wesimbi wakasimudzwa ne100. Naizvozvo, vatengesi vazhinji mumusika r ...Verenga zvimwe »
Chii chinonzi Stainless Sheet Sheet?
Post nguva: 11-10-2020
Iyo simbi isina simbi sheet ine yakatsetseka pamusoro, yakasimba mapurasitiki, kuomarara uye mechina simba, uye inopokana nehurosi neacid, alkaline magasi, mhinduro uye mamwe midhiya. Iyo simbi yesimbi iyo isiri nyore kuita ngura, asi haina ngura zvachose. Stainless simbi jira inoreva ...Verenga zvimwe »
Pakupedzisira yakwira! 201 Chando chakakunguruswa simbi isina chinhu chakamirira chakareba
Post nguva: 11-05-2020
Kuvhurwa kweQingshan 201 simbi isina chinhu kwakapa rutsigiro rwakasimba kune 201 Cold Rolling, iyo yanga ichishayikwa mukukura. Mumasikati, Qingshan 201 inotonhora inotenderera simbi yakapa J1-7350 yuan / ton uye J2-7000 yuan / ton muna Zvita, uye vatengesi vemusika vakakurumidza kutevera. , Iyo yazvino mar ...Verenga zvimwe »